Ankandindramamy : Tsy nahazo vola ny mpanao propagandy, raikitra ny sakoroka
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → octobre → 10 → Ankandindramamy : Tsy nahazo vola ny mpanao propagandy, raikitra ny sakoroka
Redaction Midi Madagasikara 10 octobre 2018 4 Commentaires
Savorovoro no nitranga teny Ambohidahy-Ankadindramamy, omaly. Olona ampolony maro no nivory sy nihorakoraka teo anoloan’ny tranon’ny Solombavambahoaka iray monina eny an-toerana. Ity farany izay fantatra, fa mpitarika ny komity mpanohana kandida iray amin’ity fifaninana ho filoham-pirenena ; izay hatao amin’ny 7 novambra izao. Ity farany izay fantantra fa isan’ireo kandida goavana ary isan’ny tsara toerana sy be mpanaraka noho izy matanjaka ara-pitaovana sy ara-bola raha jerena amin’ny zava-misy hatreto. Io lafiny io indrindra angamba no nahatonga ilay sakoroka niseho teny Ankadindramamy, omaly tolakandro.
Vory teo anoloan’ny tranon’ny solombavambahoaka iray teny, tao amin’ny tanan’Ambohidahy-Ankadindramamy ny andian’olona maromaro mba hitaky ny vola nampanantenaina azy ireo hanatrika ny hetsika ho fanohanana ny kandida iray, raha araka ny tabataba heno teny an-toerana. Nitaraina ireto olona ireto fa tsy notanterahin’ity farany izany. Nampanatenaina hizarana 5 000 ariary isan’olona hono izy ireo nefa dia nalefa nody maina fotsiny. Tsy nanaiky izany ireto andian’olona ireto ka dia nirohotra teny an-tranon’ity depiote ity hitaky ny anjarany ary saika rombo tokoa no niseho, satria efa niakatrakatra ihany ny feo. Soa fa tonga ara-potoana ireo mpitandro ny filaminana niezaka nifehy ny toe-draharaha. Ireto farany izay nanao izay nisian’ny fifampiresahana teo amin’ireo mpikomy sy ny solontenan‘ity solombavambahoaka ity ka nampiravona ny olana , araka ny fanazavana azo avy eo anivon’ny lehiben’ny kaomisarian’ny Filaminam-bahoaka miandraikitra iny faritra iny. Ity farany izay nanamarika, fa nanaiky hiala ireo olona nivory teo ireo rahefa nandre fa tsaho izany hoe vola hozaraina izany. Fanambarana ; izay nohamafisin’ilay solombavambahoaka voalaza tetsy aloha, raha nanazava ny tena antony nahatonga ity savorovoro ity ny tenany. Niaiky izy, fa nisy tokoa ny olona izay mpanara-dia azy nandritra ny fitsidihana nanaovana propagandy tao amin’ireo fokontany maromaro ao amin’ny faritra iadidiany ary nisy tokoa ny fanomezana solon-tsakafo ho an’ireo olona ireo. Saingy ireto andian’ olona izay tonga nanao fitakiana teny an-tranony ireto, dia tsy fantany akory ary tsy nifampiraharaha tamin’ireo mihitsy izy. Tsaho angamba no niely ka nahatonga izao sakoroka izao, hoy izy. Nilaza izy, fa efa tamin’ny 12 ora antoandro tokoa no nisy andian’olona nivorivory teo amin’ny manodidina ny tanànany. Tamin’io fotoana io anefa, izy sy ireo mpiara-dia aminy, dia mbola tao anatin’ny hetsika fampielezan-kevitra tanteraka ary tsy nisaraka raha tsy teo amin’ny 3 ora teo ho eo.
tsito Rabe 10 octobre 2018 at 13 h 00 min · Edit
marina fa ny vola no miresaka am ftoanany propagande otran zao fa ny manaratsy kosa tsy mety e!na rakoto na rabe mizara vola avy amzao ftoana zao!fa misy foana mo ilay olona mandoto rano ary manao fanalana baraka candidat mihintsy!mety ho strategie zay nef fa ntokony ho fatatr le olona manakorotana otran reny dia fanomezana vahana ny candidat izay aratsiana ny otran zao!!!
Mandimby 10 octobre 2018 at 12 h 51 min · Edit
Toetra voamariko amintsika Malagasy rehefa hanatrika na hanao asa de mahagaga fa hotra matahotra sa menatra izany isika eo @ fotoana fanaovana ny adihevitra na adivarotra sady makamaka sisiny izay ka rehefa avy eo tsy maharaka vaovao de feon’ny namana niaraka no henoina de matetika anefa tsaho no lasa voaray ka mahatezitra foana io rehefa tsy arakin’ny tokony ho izy no mitranga. Ka toro-hevitra no ataoko rehefa hanao fampielezan-kevitra de tena midira anatiny ary fantaro tsara daholo ny fepetra rehetra ohatra ny karama sy ny fomba andraisana izany de tsy mihafihafy sy tsy very vola enao @zay
Karl 10 octobre 2018 at 10 h 31 min · Edit
Tokony handinika ihany isika vahaoka fa tsy ho sodokan’ ny fampanantenàna paokaty sy kobaka am-bava. Inona ny zavm-bita ? nANAHONA NY FARIM6PIAINAN4 NY OLONA ? Izany no tokony jerena : ianao mandeha fiara raitra 4X4, mandeha Raoplanina sy hélikoptera ny olona tohananao, ny sasany mifatratra sahala ny omby anaty kamio, mijaly, tsy misotro rano madio…ets…..mbola lazaina ihnay fa manara-penitra izay natao na hatao!! Mahaiza re misafidy ity indray mitoraka ity sao HANENINA be vava ! Mirary soa sy ny fitahian’ ny AVO izay tsy mamitaka ho anareo rehetra eny antanindrazana eny é !!
mr 10 octobre 2018 at 10 h 02 min · Edit
Efa hatramin’ny 2009 itony olona itony no namita-bahoaka, DIA IZAO 2018 IZAO DIA MBOLA HAMITAKA INDRAY? Mba mahalala menatra e!